Minisitry ny fizahantany any Tonizia Salma Elloumi: Tian'i Tonizia ireo mpitsidika sinoa
Home » Travel Associations News » Minisitry ny fizahantany any Tonizia Salma Elloumi: Tian'i Tonizia ireo mpitsidika sinoa
Tian'i Tonizia bebe kokoa ireo mpizahatany sinoa. Salma Elloumi, minisitry ny fizahan-tany Toniziana, dia nilaza fa Tonizianina 16,000 eo ho eo no nahazo mpizahatany hatramin'ny 10 Nov tamin'ity taona ity, fiakarana 190 isan-jato raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Ny tsenan'ny fizahan-tany sinoa dia singa iray lehibe hamelomana indray ny indostrian'ny fizahan-tany Toniziana, hoy ny minisitry ny fizahan-tany Toniziana tamin'ny Alakamisy nandritra ny fotoam-pivorian'ny parlemanta.
Raha tamin'ny 2016, ny isan'ny mpizahatany sinoa any Tonizia dia nahatratra 7,300 fotsiny. Mampiseho fitomboana lehibe eo amin'ny tsena mipoitra Sinoa ny angon-drakitra. Sina dia fantatra ho mpamoaka mpizahatany lehibe indrindra any ivelany, izay mihoatra ny 100 tapitrisa isan-taona.
Miaraka amin'ny tantaran'ny 3,000 XNUMX taona mahery, Tonizia dia manan-karena amin'ny harenan'ny fizahantany.
Hatramin'ny tapaky ny volana febrily tamin'ity taona ity dia navotsotr'i Tonizia ny olom-pirenena sinoa tsy hiditra visa hitsidika ny firenena.
Nandritra ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity, ny tsena sinoa dia nahitana fiakarana 400 isan-jato.
Ireo mpampiasa vola sy mpanentana dia mahita ny fotoana mety ihany koa ary te hanararaotra an'ity tsenan'ny fizahantany mety hitranga ity.
Misy toeran-tany hafa toa an'i Emira Arabo Mitambatra sy Qatar, mitovy amin'i Tonizia, fa misy tombony amin'ny fampitaovana bebe kokoa ho an'ny fitaterana, fandoavana ary fividianana. Ny sehatry ny fizahan-tany Toniziana dia tokony hanaparitaka ny banga mba hanamafisana ny tsenan'ny fizahan-tany sinoa.
Israel dia mirakitra isa betsaka indrindra momba ny fizahantany
Boeing, Avolon Famaranana fifanarahana ho an'ny fiaramanidina MA 75 737 MAX
Barbados Fizahan-tany mitady CEO vaovao